“DAAWO SAWIRRO”Arday ka badan 600 oo maanta ka qalin jebisay jaamacadda Plasma – Radio Muqdisho
Munaasabad maanta lagu qabtay xarunta jaamacadda Plasma ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qeybgalay sii hayayaasha wasaaradaha dhalinyarada Isboortiga,iyo wasaaardda tacliinta sare boqolaal arday ah iyo mas’uuliyiin ka socotay qeybaha bulshada Soomaaliyeed.
Munaasabadan ayaa waxaa ku qalin jebinayay inkabadan 670 arday oo dhameysatay qeybaha kala duwan ee kulliyadaha jaamacaddasi kuwaasoo mudo baranayay qaatayna shahaadada Bachelor degree.
munaasabadan ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay Ustaad Xasan Kaafi oo ah madaxweynaha Jaamacadda Plasma oo ugu horeyn ugu hambalyeeyay ardayda maanta gaaray hadafkii ay higsaneyeen isagoo xusay in jaamacadda Plasma ay diyaar u tahay haqabtirka waxbarasho ee dhalinta Soomaaliyeed si ay u tiigsadaan jiilasha la midka ah.
Agaasimaha warbaahinta Qaranka C/raxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala oo ku hadlay afka ardayda maanta qalin jebisay ayaa ku booriyay dhamaan ardayda Soomaaliyeed in ay waxbartaan maadaama xaaladda uu dalku ku jiro xiligan aysan ka saari Karin dhalinyaro aan wax baran.
siihayaha wasiirka dhalinyarada iyo cayaaraha Dr.Khaalid Cumar Cali oo isna khudbad ka jeediyay munaasabadda ayaa tilmaamay in loo baahanyahay kordhinta xarumaha waxbarasho ee dalka gaar ahaan Jaamacadaha.
Siihayaha wasiirka tacliinta sare mudane Ducaale Aadan Maxamed oo munaasabadda soo xiray ayaa ardayda ugu hambalyeeyay munaasabadda maanta ee ay ku qalin jabiyeen waxa uuna wax lagu farxo ku tilmaamay in arday tiradan leh ay sanad weliba kasoo baxaan jaamacadaha kuyaala caasimadda dalkeena.